Thriller | Movie Guide !
Home! Action Animation Adventure Murder Thriller Comedy Drama Mystery Romance Sci-Fiction blog ! ရေးခဲ့သမျှ … Home \_ Thriller Thriller
Ryo Kawase ဟာ မဂ္ဂဇင်းတိုက်လေးတစ်ခုက စာရေးဆရာ ပေါက်စလေး တစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ အယ်ဒီတာက ရှာပေးတဲ့ တိုက်ခန်းအသစ်မှာ စတင်အခြေချနေထိုင်ရင်း ရေဆိုးမြောင်းတွေအကြောင်း အချက်အလက်တွေ စုဆောင်းပြီး ဆောင်းပါးရေးနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူပြောင်းရွှေ့နေထိုင်တဲ့ တိုက်ခန်းရဲ့ နံရံဟာ အလွန်ပါးတာကြောင့် တစ်ဖက်အခန်းက အသံတွေကို ကြားနေရပါတယ်။ သူနဲ့ ကပ်လျက်အခန်းမှာ အမျိုးသမီး တစ်ဦးနေထိုင်ပါတယ်။ အမျိုးသမီးဟာ ငယ်ရွယ်ပြီး စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းတယ်လို့ Ryo က ထင်ပါတယ်။ ရည်းစားလည်း မရှိ တကိုယ်တည်း နေထိုင်တဲ့ Ryo အတွက် စိတ်ဝင်စားစရာ အချိန်တွေ ရောက်ရှိလို့ လာပါပြီ။ အမျိုးသမီး ရေချိုးနေချိန်ဆို တဖက်ခန်းကနေ ကြားနေရတာကြောင့် စိတ်ဝင်တစားတွေ ဖြစ်လာပြီး တဖက်ခန်းက အသံကို Ryo […]	Read more San Andreas (2015)
ကရကဋ် | Action, Drama, Thriller
သဘာဝဘေးအန္တရယ်တွေထဲက တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ငလျင်အကြောင်းကို အဓိက ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဇာတ်ကားတစ်ခုဖြစ်ပြီး ငလျင်ရဲ့ နောက်ထက်ဆိုးကြိုးတွေအကြောင်းကို မိသားစု ၃ ဦးရဲ့ သံယောဇဉ်လေးနဲ့အတူ ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဇာတ်ကားလေးတစ်ခုပါ။ Ray ဟာ Los Angeles မီးသတ်ဌာနရဲ့ လေကြောင်းကယ်ဆယ်ရေးဌာနမှာ လုပ်ကိုင်နေတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး သူ့မိန်းမ Emma နဲ့ မကြာခင်ကွာရှင်းတော့မှာပါ။ သူ့မှာ Blake ဆိုတဲ့အရွယ်ရောက်နေပြီဖြစ်တဲ့ သမီးတစ်ယောက်လည်း ရှိပါသေးတယ်။ တစ်ခြားတစ်ဖက်မှာတော့ မြေငလျင်ပညာရှင် Hayes နဲ့ သူ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် Kim တို့ဟာ Hoover ဆည်မှာ ငလျင်ကြိုတင်ခံမှန်းရေးအတွက် သုတေသနလုပ်လျက်ရှိနေပါတယ်။ သူတို့သုတေသနဟာ အောင်မြင်တယ်လို့ ဆိုလို့ရပါတယ်။ ထိုအချိန်မှာပဲ ပြင်းအား ၇.၁ အဆင့်ရှိတဲ့ ငလျင်လှုပ်ခတ်သွားပြီး Hoover ဆည်လဲ ပျက်စီးသွားခဲ့ပြီး Kim လည်း အသက်ပေးခဲ့ရပါတော့တယ်။ […]	Read more Scarlet Innocence (2014)
ကရကဋ် | Romance, Thriller
Shim Hak-kyu ဟာ တက္ကသိုလ်တစ်ခုမှာ စာသင်ကြားနေတဲ့ ဆရာတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ကျောင်းမှာ sex ကိစ္စတစ်ခုနဲ့ပတ်သတ်ပြီး သတင်းထွက်လာတာကြောင့် သူ့ကို နယ်မြို့လေးတစ်ခုကိုသွားပြီး ကိစ္စမဖြေရှင်းရသေးခင်အချိန်ထိ စာသွားသင်ခိုင်းခြင်းခံနေရပါတယ်။ အဲ့မြို့လေးမှာသူဟာ Deok-ee လို့ခေါ်တဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့ ဆုံမိပါတော့တယ်။ သူမကတော့ ပန်းခြံတစ်ခုမှာ အလုပ်လုပ်ကိုင်နေပြီး အပြစ်ကင်းချစ်စရာကောင်းလှပါတယ်။ Deok-ee ဟာ စကားမပြောနိုင်တဲ့ သူ့မိခင်နဲ့ အတူနေထိုင်လျက်ရှိပါတယ်။ သူတို့နှစ်ဦးဟာ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်ချစ်ကြိုက်မိပြီး အတူနေထိုင်လျက်ရှိနေကာ Deok-ee လည်း သူ့အမေရှိရာကို မပြန်ဖြစ်တော့ပါဘူး။ ထိုအချိန်မှာပဲ Shim Hak-kyu ဟာ သူ့တက္ကသိုလ်ကို ပြန်သွားရဖို့ရှိလာပါတော့တယ်။ ထို့ကြောင့်သူဟာ Deok-ee ကို ထားခဲ့ရတော့မှာဖြစ်ပြီး Deok-ee မှာ ကိုယ်ဝန်လည်းရှိနေပြန်ပါတော့တယ်။ Shim Hak-kyu ဟာ လူပျိုလူလွတ်တစ်ယောက်မဟုတ်ပဲ မိန်းမရှိကာ သမီးလေးတစ်ယောက်လည်းရှိပါသေးတယ်။ ထို့ကြောင့် Shim Hak-kyu ဟာ Deok-ee ကိုယ်ဝန်ကိုဖျက်ချခိုင်းခဲ့ပါတော့တယ်။ Deok-ee ဟာ Shim Hak-kyu ကို ဆက်သွယ်ဖို့ကြိုးစားပေမယ့် Shim Hak-kyu […]	Read more The Boy Next Door (2015)
April Outrageous | Thriller
ကလဲယ် (Claire) က အထက်တန်းကျောင်းမှ ဂန္ဓ၀င်စာပေ (literature) ဘာသာရပ်ကို သင်တဲ့ဆရာမ တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ယောကျာ်းနဲ့ကွဲနေတဲ့အတွက် လက်ရှိမှာ အထက်တန်းကျောင်းသားဖြစ်တဲ့ သားဖြစ်သူ ကယ်လ်ဗင် (Kelvin) နဲ့အတူတူနေပါတယ်။ သူမရဲ့ သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ ကျောင်းမှ ဒုကျောင်းအုပ်လဲဖြစ်တဲ့ ဗစ်ကီ (Vicky) က ဖောက်ပြန်ခဲ့တဲ့ ယောကျာ်းနဲ့ ကွာရှင်းစေချင်ပေမယ့် ကလဲယ်တို့ ကာယကံရှင်နှစ်ယောက်ကတော့ အိမ်ထောင်ရေးကို ပြန်တည်ဆောက်ဖို့ ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ အဲ့ဒီနောက် ကလဲယ် တို့မိသားစုထဲကို နိုဝါ (Noah) ဆိုတဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက် ၀င်ရောက်လာပါတယ်။ နိုဝါက ဘေးအိမ်ကိုလာလည်တဲ့ အသက် ၂၀ အရွယ် မိဘမဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ကလဲယ် ကိုကူညီတဲ့အတွက် သူတို့သားအမိနဲ့ အတော်ရင်းနှီးသွားပါတယ်။ တစ်ရက်တော့ ကယ်လ်ဗင်နဲ့ သူ့အဖေတို့ ကျောင်းပိတ်ရက်မှာ အပျော်တမ်းငါးဖမ်းထွက်သွားပါတယ်။ […]	Read more Movie Guide ! - Close